Fabio Capello oo falanqeeyay xaalada Man City, xilli sidoo kale uu ka hadlay kulanka ay la ciyaarayaan Real Madrid – Gool FM
Fabio Capello oo falanqeeyay xaalada Man City, xilli sidoo kale uu ka hadlay kulanka ay la ciyaarayaan Real Madrid
(Yurub) 05 Jan 2020. Halyeeyga reer Talyaani ee Fabio Capello ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Daily Mail” ee dalka England wuxuu kaga hadlay dhinacyo badan ee ku saabsan kubadda cagta.
Fabio Capello ayaa wuxuu si gaar ah kaga hadlay xaallada ay xilli ciyaareedkan ku sugan tahay kooxda Manchester City uu hoggaaminayo macalinta reer Spain ee Pep Guardiola.
Manchester City oo labadii xilli ciyaareed la soo dhaafay ku soo guuleysatay horyaalka Premier League ayaa waxay xilli ciyaareedkan ku jirtaa booska saddexaad ee miiska kala sareynta, waxayna leedahay 44 dhibcood.
Fabio Capello ayaa wuxuu ugu horeyn wareysigan kaga hadlay kulanka ku dhax mari doono kooxaha Real Madrid iyo Man City tartanka Champions League wuxuuna yiri:
“Ciyaarta u dhaxeysa kooxaha Real Madrid iyo Manchester City ee tartanka Champions League waxay noqon doontaa mid aad u xiiso badan, aad ayey isugu dhowyihiin marka aad fiiriso qaab ciyaareedka labada kooxood”.
“Laakiin Manchester City diirada ma saareyso tartanka Champions League, waxayna sidoo kale iska dacyaday horyaalka Premier League”.
“Manchester City waxay ku dhibtooneysaa gudaha dalka England xilli ciyaareedkan, laakiin waxa dhacaya waa wax layaab leh, sababtoo ah inta badan waxay arrintan dhacdaa bisha Abriil ee ma ahan xilliga Christmas-ka, tani waa wa laga niyadjabo natiijooyinka ayaana sidaas sheegaya”.
“U maleyn maayo in Jürgen Klopp uu ka sii balaarin doono farqiga u dhexeeya Liverpool iyo Man City ee tirada dhibcaha haatan”.
Antonio Conte oo ka hadlay wararka la xiriirinaya xiddigaha Arturo Vidal iyo Christian Eriksen
Waa kuma xiddiga kaliya ee saddex jaale iyo casaan qaatay hal Kulan?